Machadka HAYAAN oo Garoowe ku qabtay kulan looga doodayo doorka bulshadu ka qadan karto ka hortagga Musuqa (Sawirro). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Machadka HAYAAN oo Garoowe ku qabtay kulan looga doodayo doorka bulshadu ka qadan karto ka hortagga Musuqa (Sawirro).
Machadka HAYAAN oo Garoowe ku qabtay kulan looga doodayo doorka bulshadu ka qadan karto ka hortagga Musuqa (Sawirro).
February 8, 2019 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Machadka Cilmi barista & darasaadka Siyasadda Soomaaliyeed ee HAYAAN ayaa kulan kusabsan Isla xisabtanka ,Hufnaanta iyo ka hortaga musuqmasuqa ku qabtay Hotelka CITY VIEW Garowe.
Kulanka waxaa loo qabtay Xildhibanada Golaha degaanka Caasimadda Puntland Garowe,Dhalinyaro iyo qaybaha kale ee Bulshada,waxaana looga dooday doorka bulshada ka qadan karto Isla xisabtanka ,Hufnaanta iyo ka hortaga musuqmasuqa.
Dr,Cabdiraxmaan Sulub,Siciid Diraac iyo Maxamed Cabdi Ciise oo fududaynayey kulanka ayaa bulshada sharaxaad ka siiyey Musuqmaasuqa ,sida looga hor tagi karo iyo doorka ay ka qadan karto bulshada rayidka ah ee Puntland.
Dadweynaha kazoo qaybgalay kulanka ayaa soo jeediyey talooyin iyo fikrado ku adan sida looga bixi karo Musuq maasuqa ,sida loo yarayn karo ,waxaa kaloo ay hoga tusaleeyeen ahmiyada ay leedahay in laga guuro habk qabaliga ku salaysan ee bulshadu kusoo xulanayso cida matalaysa,iyadoo loo hayaamayo hanaanka xisbiyada badan.
Aqoonyahanada iyo waxgaradka xusay in Musuqu aanu ahayn lacag la xaday oo kaliya ee ay tahay dayaca masuuliyada qofku hayey,baalmarista nidaamka howl fulinta adeega dadweynaha ee lagu tagri falayo iyo in laga been sheego wax kasta oo gacanta uu hayey masuulku ee la xiriirta Mashariicda horu marineed.
Somaliland Oo war Ka Soo Saartay Guddigii Uu Magaaabay Madaxweyne Farmaajo
July 18, 2019 By Keyse Aadan
Garoowe: Madaxweyne Deni oo Xilal Cusub Magacaabay
July 18, 2019 By Horseed Team
Madaxwe Deni Oo shaqo joojin Ku Sameeyay Guddoomiyaha PHA
Garoowe: Wasiir Saalax Xabiib oo Iscasilay
July 17, 2019 By Horseed Team
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Ku Baaqay In Wadajir Looga Qeyb Qaato Dib-U-Dhiska Galmudug
July 17, 2019 By Omar Akhyaar